“MAAF GARAA JABAATTA!!” – Welcome to bilisummaa
“MAAF GARAA JABAATTA!!”
Yaa giddu gala bahaa dachii arabootaa,
Nu Hammeenya hin qabnuu eega carraaqataa,
Nuti shiraan qabnuu maaf zaliil nu gootaa?
Biddeenaaf janneeti Manaa baane nutii,
Mirgaa qabnu dhaabnee biyya teenyarrattii,
Oromiyaa badhaatuu dirqiin manaa baanee,
Gammoojjii jibuuti keessatti gubannee,
Beelaa fi dhukkubaan hedduu gaaga’amnee,
Rakkoo meeqaa dabarree tinfatti as dhufnee.
Akka nama lubbuu isaa tana jibbee quufee,
Amna guyyaa meeqaa bahar irratti du’a suufe,
Garii bishaan nyaatee kaaniis qurxummiin quufe,
Gariiniis cirraachaaa yaman keessa kufee,
Hambaa waa xiqqootu bineensaarra hafee,
Cicha lubbuudhaatiin shorroqaa as dhufee,
Duuba ati arra maaf garaa jabaattaa?
Lubbuu hiyyeeyyiidhaa maaliif galaafattaa?
Nuti sirraan teenyuu sirraa galuu yaanaa,
Waan cacarraaqqanne guduunfannee baanaa,
Lakkii nu quusadhuu yaa dachii nageenyaa,
Suuta nurraa ja’i yaa qiibla addunyaa,
Badii takkan qabnuu
Carraaqata qofa nuti kaayyoon teenyaa,
Maaluma si goonee baafta lubbu teenya?
Addaan nu laalladhuu
Mee suut ja’iiti gargar nu baafadhuu,
Nuu miidhu kee dura,
Eeenyu akka taane sirrit nu hubadhu!!
S.K & Najiib Zannuun
Previous Ethiopian migrant killed in Saudi crackdown
Next Coffee in the Eyes of the First Coffee Drinkers – the Oromo People